Fitsipika Yandex: fanaterana sakafo tsy misy olona any Moskoa | TeraNews.net
Fitsipika Yandex: fanaterana sakafo tsy misy olona any Moskoa
mpanoratra Kravetz Pavel Navoaka tamin'ny 09.12.2020
Na dia tsy afaka manapa-kevitra amin'ny fomba hanomezana sakafo amin'ny mpanjifa aza ireo talen'ny sarimihetsika foronina siansa, dia niroso tamin'ny hetsika i Yandex. Tadidinao ilay sarimihetsika "The Fifth Element", izay nanaterana sakafo tamin'ny sambo manidina ny mpilalao fototra? Minoa ahy ianao, tsy ho ela dia afaka hanao zavatra mitovy amin'izany isika.
Fanaterana sakafo tsy misy olona any Moskoa
Toa maneso, mazava ho azy, mampihomehy - fanaterana sakafo tsy misy olona any Moskoa. Eritrereto ny Amerikanina sy ny eropeana an'i Russia miaraka amin'ny bera mandeha eny an-dalambe. Ary avy eo ny fanaterana sakafo tsy misy olona any Moskoa, ary avy amin'ny karazana Yandex aza. Tapitra ny vazivazy. Ny Rosiana dia nandray an-tanana ny fandraisana andraikitra amin'ny fampandrosoana ny teknolojia IT ho eo am-pelatanan'izy ireo.
Na dia mando aza izany rehetra izany. Fiara tsy mataho-dàlana mitovy habe amin'ny fiara radio no entin'i AI amin'ny araben'ny tanàna. Misy ihany koa ny fotoana ihomehezana ny mpamorona - ny milina tsy mahay mandray sisiny. Ary malemy ny fandrakofana. Saingy io tetika io dia efa mitsapa ny mekanin'ny famindrana sakafo azo antoka amin'ny mpanjifa. Ny fandefasana sakafo tsy misy olona any Mosko no dingana voalohany. Ao amin'ny tambajotra sosialy, ny mekanika amin'ny fandefasana baiko amin'ny alàlan'ny rivotra dia efa resahina fatratra.
Misy fahatokisana tanteraka fa ny 2021 dia ho fotoana ivoho ho an'i Rosia. Ny firenena, izay 5 taona lasa izay dia noheverina ho relikin'ny lasa, tamin'ny fomba hafahafa nitsangana avy tamin'ny lavenona. Toro-marika tsara indrindra ho an'ny famokarana, teknolojia IT, fitaovam-piadiana ary fanafody. Na ny fanaterana sakafo tsy misy olona aza dia tsy maninona, nefa mbola eo ihany i Russia. Toy ny satelita artifisialy voalohany, ny olona eny amin'ny habakabaka, sns.
Google Photos dia manitatra ny fiasan'ny serivisy
Ny tsara kokoa hanasana ny gorodona - misafidy fitaovana sy kojakoja
Viber, Telegram ary WhatsApp no ​​mifehy ny fifandraisana
Elozo Xiaomi Zuodu azo ovaina - tolotra chic amin'ny $ 20
Ohatrinona ny vola ilainao hanatsarana ny LGA 1700
Ahoana ny fisafidianana ny diagonal eo amin'ny efijery TV
Lalao informatika CHUCHEL (Scarecrows)
18 fotsy Porsche 911 GT3 2015 taona nefa tsy nihazakazaka
Ny anaran'ireo lehilahy tsy nivadika teto an-tany